Ny mari-panain'ny rivotra miforitra miaraka amin'ny tara-masoandro dia miteraka tsindry mafy amin'ny vatohara. Io fihenjanana io dia mety hiteraka korontana eo amin'ny zooxanthellae ho an'ny vatohara izay mitarika ho amin'ny harary mangatsiaka.
Loharano: Great Reef Marine Park Authority (GBRMPA)
Ny anjara asan'ny Tempoly sy ny Fahazavana
Ny trigger main fampandrenesana marevaka lehibe dia fitomboan'ny mari-pana amin'ny rano mihoatra ny farafahakeliny amin'ny fahavaratra. Amin'ny rivo-doza avo lenta, ny rafitra photosynthetic ny zooxanthellae dia mora simba amin'ny fahazavana miditra mitarika amin'ny famokarana karazam-borona oksizenina. Ireo no loharanon'ny fiakaran'ny herisetra ao amin'ny vatan'ny haran-dranomasina, ka mahatonga ny haran-dranomasina hivoaka ny zooxanthellae mba hisorohana ny fahavoazana hafa. Raha mitombo ny mari-pana dia ny trigger amin'ny fahandro, ny fahazavana koa dia zava-dehibe. Ny fitomboan'ny fitiliana dia mety hampitombo ny mety ho voka-bidy, raha toa kosa ny vatoharan-damosina ampahany sasany dia mety handefitra ny mari-pahaizana avo latsa-ponenana mialoha ny fijanonana.
Famerenana amin'ny Bleaching
Zooxanthellae no anarana nomena karazana alg amin'ny karazana Symbiodinium. Ireo zooxanthellae ireo dia samy hafa tanteraka, saingy mizara ny endrika lafiny iray izay ahafahan'izy ireo miaina anaty hara-bato sy ireo zavaboary an-dranomasina tropikaly hafa miaraka amin'ny fifandraisana eo amin'ny lafiny iray. Sary © M. Takabayashi
Raha tsy misy ny zooxanthellae hanohana ny fizotrany metabolika dia manomboka mijoro ny vatohara. Tokony hiverina amin'ny toetr'andro ara-dalàna ny mari-pana amin'ny rano, ny vatohara dia mety ho tafavoaka velona amin'ny hainteny. Raha toa ka tsy mafy loatra ny fandrehetana, dia mety hiverina avy amin'ny isa kely sisa tavela ao amin'ny vatan'ny haran-dranomasina ny zooxanthellae, ka mamerina indray ny vatohara amin'ny loko ara-dalàna mandritra ny herinandro na volana. Ny sasany amin'ireo vatohara, toy ireo vatoharan-tany maro, dia tsy afaka velona mandritra ny andro 10 tsy misy zooxanthellae. Ny sasany, toy ny sambon-danitra marobe, dia afaka heterotrophs ary afaka miaina mandritra ny herinandro na volana maromaro ao amin'ny fanjakana mibaribary amin'ny famatsiana plankton. Na dia ny vatohara izay tafavoaka velona aza dia mety hahatsapa fa mitombo ny tahan'ny fitomboana, mihena ny fahaiza-manao amin'ny herisetra, ary mihabetsaka ny aretina.
Fomba fiovana amin'ny fahantrana
Ny Corals dia miovaova arakaraky ny fahatsapan'izy ireo ho marefo. miovaova Ny endriky ny fahatsapana dia azo jerena eo amin'ny karazana karazany, miaraka amin'ny fironana ankapobeny amin'ny fahatsapana ambony kokoa amin'ny endriny kokoa, ny sampana ary ny fihenan-tsakafo kokoa amin'ny karazana masira, indrindra ireo izay manana polypes foly.
Ny Corals dia afaka mahazo fahazoana fandeferana bebe kokoa amin'ny fanasitranana ihany koa mihetsika hatrany amin'ny mari-pahaizana ambony kokoa na fikajiana bebe kokoa. Ny vatoharan-dranomasina, ohatra, dia matetika mahavita mandefitra rano ambony kokoa noho ny zanabola mitovy karazana amin'ny hantsan'ny vatohara.
Ny karazana zooxanthellae koa dia mety hitarika ny fahatsapana ho an'ny bleach. Misy farafahakeliny sivy (antsoina hoe cludes) misy zooxanthellae fantatra amin'izao fotoana izao, ary mety hisy karazany maro ao amin'ireny vondrona ireny. Ireo zooxanthellae dia miovaova arakaraka ny fahaizan'izy ireo mandefitra ny mari-pahaizana ambony, ary misy ny vatohara sasany kofehy hafanana, ary noho izany, miorina mafy kokoa amin'ny fahandroana. Na izany aza dia mihamitombo tsikelikely ny valan-javamaniry miaraka amin'ny hafanana mangatsiaka, ka mamorona fivarotana evolisiona amin'ny fifandraisana simbiotika izay mihazona fahasamihafana amin'ny fifandraisana amin'ny vatohara.
Lahatsary: ​​Zooxanthellae manify hafanana (2: 56)
Andrew Baker miresaka momba ny hafanana zooxanthellae.
Mpitantana Reefatra mitondra mankany amin'ny Coral Bleaching